6 kasị mma Android data nchicha-enyere gị aka chebe gị onye data
The nke nke data nzuzo na-eto eto mkpa ekele ka ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ ndị cyber omempụ na ịgbanwe isi data ọcha na-emezu ihe e kpere ọgụ. N'ezie ọ bụrụ na ị na-achọ na-ere a smartphone, mgbe ahụ, ị ​​ga-ele anya ihichapu ozi dị mkpa na a ikele ịnọgide na-enwe nzuzo gị. I nwekwara ike chọrọ ka ihichapụ onwe gị data ọbụna mgbe ị ka na-onye nwe nke ekwentị. Ihe ịma aka na nanị ihichapụ gị data ma ọ bụ na-eme a ndabere factory nrụpụta bụ na ụfọdụ na smart ndị mmadụ nwere ike iji ụfọdụ data mgbake software iji nweta gị ọmụma nke pụtara na ị dị mma anya iji a data nchicha ngwa iji nweta a mere. Na nke a ederede, anyị anya na nke 6 nke kasị mma erasers nke ga-eme anwansi maka gị.
Wondershare SafeEraser bụ oké ngwá ọrụ nke na-enyere gị aka ehichapụkwa ihe niile na gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ dịghị ihe dị recoverable n'adịghị Iweghachi factory ọnọdụ. Wondershare SafeEraser bụ ezigbo Android ngwaọrụ "ihichapu" ngwa e mere iji na-adịgide adịgide ehichapụkwa onwe onye nile ọmụma si ngwaọrụ iji US Military spec n'elu-ede technology ijere data unrecoverable; alọta na ngwaọrụ a "dị ọcha wepụrụ ebubo" ala n'ihu gị resell, inye ma ọ bụ ahia ya.
Ọ pụrụ inyere gị ihichapu niile data na Android ngwaọrụ kpamkpam na-enweghị na-eweghachiri.
Ọ na-enye free ikpe version.
Na-akwado android 2.1 ka Android 6.0.
Ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface; erasing data n'ime atọ nzọụkwụ.
A bụ ihe ọzọ na ngwa na-boosts a dịgasị iche iche nke atụmatụ niile ike na nke a otu ngwa. Dị nnọọ ka aha na-atụ aro, ngwa a maara nke ọma dị ka ihe android na IOS mobile nnyemaaka ma ọ bụ na uru ghọtara ya ike na erasing data algọridim. N'ezie, nke a na desktọọpụ ngwa wee na-achọghị ịzụ otu nke kasị mma mgbe ọ na-abịa na nke atụmatụ pụta ụwa ya isi imewe. Otu n'ime ndị kasị adọrọ adọrọ imewe akụkụ bụ arụmọrụ na data erasing maka ma android na IOS nyiwe na Mac na Windows. Nke a bụ iji na-egosi na dị ka onye ọrụ, inwe ngwá ọrụ ọzọ bụ nke na-egbu ihe karịrị otu nnụnụ na otu nkume otutu.
Ekpochapụ data site miri scanning algọridim
Ọ na-arụ ọrụ ọma niile faịlụ usoro
Na-akwado Mac na Windows
A bụ ihe ọzọ jụụ desktọọpụ ngwa na nyekwara ọdịmma na zuru ekwentị mmekọrịta na nche nke na-enye ya adịchaghị ọrụ smart data erasing arụmọrụ. Otú o sina dị, ngwa na-abịa na a free version na-enye gị ohere e kpere na inwale free nche na ekwentị management functionalities. Ndị dị mfe, nke a bụ software na Aims na-enye ihe kasị mma data nche ngwọta na-ya ọrụ.
Ọ nwere mma ọrụ interface
Ọ bụ mara ezigbo mma na ekwentị management atụmatụ
Ọ bụ a bit pricy
Nke a bụ otu oké ngwa na exudes klas na-anapụta nche ọrụ ka android ekwentị ọrụ, N'ụzọ bụ isi, na-eji ngwa na-abụghị nanị iji ehichapụkwa data ma ọ na-chepụtara inye bespoke ngwọta na ọtụtụ ngwa ọdịnala na-adịghị. Okwu nke ime nlekota nke ekwentị gị site GPS, SMS ide ozi n'ekwe ntị, ime installs, SMS ka Web nkwurịta okwu n'etiti ndị ọzọ.
Ọ nwere ụfọdụ ndị kasị mma mgbochi na-ezu ohi atụmatụ
Ọ na-erepịakwa ala batrị ike
1 Kpatụ nchicha
Eziokwu ahụ bụ na 1 Kpatụ nchicha bụ n'etiti ndị kasị mma data erasers na android bụghị a fluke ekele ya ikike machiini data erasing. The ezi ihe na nke a ngwa bụ na onye na nwere ike ịkpalite ọ na-ehichapụ ekwentị data dabeere na ụfọdụ na ọnọdụ na parameters. A ezi ihe nlereanya bụ ma ọ bụrụ na e nwere usoro nke paswọọdụ ọdịda ma ọ bụ mgbanwe subscriber amata. Ndị ọzọ mma akụkụ bụ eziokwu na ọ bụ nnọọ ọnụ ala-ọnụ na ad free version-aga n'ihi na a dollar!
Ọ na-ekwe ntuziaka na na akpaka ihicha
Ọ na-enye gị oké interface jikwaa ọdịnaya ị ga-achọ ka ihichapụ
Ọ nwere ike ihichapụ ọbụna ekpochi SMS
Vipre Mobile Nche
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị ngwa ọdịnala na nke a ndepụta, vipre mobile nche ngwa e mere ka ihe ike n'ihi na otutu nche ngwọta ebe na-elekwasị anya na eziokwu na obi iru ala na ekwentị mkpanaaka na engulfs a obosara akporo variables. Na nke a ngwa, ị nwere ike mfe soro a furu efu ekwentị na remotely ehichapụkwa data maka nchekwa ihe. Ọbụna ka mma, ị ga-enwe ike geo-ịchọta ndị na ekwentị gị nwere ike hazi akpaghị aka alerts na-eme ma ọ bụrụ na na ezuru ekwentị gị. Ị nwere ike ịhọrọ iji free version dị nnọọ ka a uto nke mmiri mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta zuru version ma ọ bụrụ na ị na-afọ ojuju na ya.
Ọ nwere obere Doppler ugboro
Ọ nwere ibu nke atụmatụ
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ arụnyere ngwa
Ọ nwere ike na-eri a otutu data
N'ezie, na ọnụ ọgụgụ nke nche ngwa ọdịnala na ahịa ndepụta bụ adịghị agwụ agwụ ma isii bụ achọghị ịzụ a ịkpụ karịa ndị ọzọ. Ọ bụ mgbe niile dị mkpa iburu n'obi na ngwa ga-blended na nche omume ma ọ bụrụ na ha bụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma. Na ndị ọzọ okwu, ọ bụ ihe amamihe na-abụ mgbe nile nọgide iyi egwu nke ndị ụdị ndị ọzọ nke data nche ọwa.
Olee otú kpamkpam doro anya iPhone
4 Easy Solutions Iji kachapụ Downloads bụla na ngwaọrụ
3 Ụzọ iji Hichapụ Undeletable Files na unu adịghị Maara Banyere
> Resource> ihichapu> 6 Best Android Data Erasers iji nyere aka kpuchido gị Personal Data